Daawo Sawiro: Caro ka dhalatay nin Israa’iili ah oo isku soo sawiray Masjid
Daawo Sawiro: Caro ka dhalatay nin Israa’iili ah oo isku soo sawiray Masjika Nebiga
Sawir uu muwaadin Israa’iili ah ku dhex galay masjidka nebiga ee ku yaal Madiina ayaa caro badan ka dhex abuuray baraha ay bulshada ku wada xiriirto ee Carabta.
Ben Tzion oo 31 jir ah kuna dhashay Ruushka ayaa bartiisa Facebook soo dhigay sawirro uu ku galay magaalooyin ku yaal Iiraan, Sacuudi Carabiya, Lubnaan iyo Urdun.
“Shacabka Sacuudi Carabiya waxay garab istaagayaan qaranka Yuhuuda. Nabada ka curata Bariga Dhexe oo ku salaysan jecayl iyo is xushmeyn.” ayuu ku sheegay bartiisa Facebook.
Dadka aan Muslimka ahayn ayaa laga mamnuucay inay galaan magaalada Maka, waxaana lagula taliyaa inay ka joogsadaan qeybo ka mid ah bartamaha Madiina ee uu ku yaal masjidka nebiga.
Balse Tzion ayaa sheegay in masaajidda Madiina ay u furan yihiin dadweynaha.
Ninkan oo sanadkii 2014 qaatay dhalashada Israa’iil ayaa u sheegay wargeyska Times of Israel inuu hiwaayad u noqatay booqashada dalalka Muslimka, uuna u gudbiyo farriin ah “ixtiraamidda dhaqanada iyo diimaha kale”.
Waxa uu sheegay in dadka Carabta ah ee uu la kulmay ay u muujiyeen “kalgacayl iyo maxabo ay u qabaan Israa’iil iyo dadka Yuhuuda ah”.
Tzion ayaa sidoo kale soo bandhigay sawirro uu ku galay magaalooyinka Tehran iyo Qom ee dalka Iiraan. Xukuumadaha Tehran iyo Tel Aviv ayaa waxaa ka dhexeysa cadaawad weyn, Iiraan-na ma ogola in muwaadiniinta Israa’iil ay dalkeeda galaan.
Inkastoo uu nabad ka hadlayay, ayaa hadda sawirrada Tzion waxaa ka dhashay caro badan.
24-kii saac ee lasoo dhaafay, in ka badan 90,000 oo farrin oo lagu baahiyay Twitter-ka ayaa looga hadlay booqashada ninkaas ee masjidka nebiga.
“Culimadii ayaa xabsiyada ku jira, Yuhuudna waxay gashay masjidka nebiga. Waa wax laga xumaado,” ayuu qof Carab ah Twitterkiisa ku qoray.
Sida uu sheegay wargeyska Times of Israel, jawaabaha carada wata ee ka dhashay sawirrada ninkan ayaa dhaliyay in barta Instagram ay xayirto cinwaankiisa.
Arrintan ayaa kusoo beegamaysa xilli uu soo wanaagsanaanayo xiriirka Sacuudiga iyo Israa’iil ayagoo wadaaga mucaaradad ka dhan ah galaangalka sii kordhaya ee Tehran ay ku yeelanayso gobolka.
Taliyaha ciidamada Israa’iil sareeye gaas Gadi Eizenkot, ayaa dhawaan u sheegay bar online oo laga leeyahay Sacuudiga in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu “xogta sirdoonka” la wadaago xukuumadda Riyaadh.
AMISOM Trains Somali Security Forces On Engendering Women
WARKA 07 11 2018 Madaxweynihii Koofur Galbeed Shariif Xasan oo iscasilay kana tanaasulay musharaxnimadiisa
Warka 30 04 2017 Gabar dadaal dheer u gashay in Australia ay Soomaaliga gudoonsiiso lacago…